Soo dejisan GO Launcher EX 1.12 – Vessoft
AndroidNidaamkaShakhsiyeyntaGO Launcher EX
Bogga rasmiga ah: GO Launcher EX
XAADIRIN Launcher EX – software ah in Customize ka muuqday iyo design of bandhigay qalab. Software The kuu ogolaanayaa inaad u xalliso codsiyada ay fayl, bedesho far, dooran asalka, Customize oo macaanaa ee animation iyo intii ayna of Widgets. GO Launcher EX ka kooban qalab ay u Customize baaxadda Roobka shaashadda, furid ilaaliya iyo daaha taabto. Software waxaa ka mid ah tababaraha, kaas oo kuu ogolaanaya in aad u xalliso codsiyada magac ama size, nadiif ah kayd iyo in ay sameeyaan kaxaynta. GO Launcher EX sidoo kale awood u ah in la xoojiyo softwares habka lagu daro isku xira.
Taageerada mawduucyada kala duwan
Dhiciyaan of Widgets
Tiro badan oo ah qalab
Kartida in ay ku xidhmaan daro
Soo dejisan GO Launcher EX
Faallo ku saabsan GO Launcher EX
GO Launcher EX Xirfadaha la xiriira
Kingo ROOT – waa barnaamij sahlan in la isticmaalo si loo helo xididka hal guji. Software-ka wuxuu taageeraa moodooyin badan oo qalab ah soosaaraha hogaamiya.
Software ayaa si aad u eegto, la abuuro oo ka soo fagid buugagga taariikhda noocyada kala duwan. Sidoo kale software la codsiyada dhinac saddexaad ka shaqeeya in la furo files kala duwan iyo dukumentiyo.